Nkịtị Structure katapila TY230-3 - China Xuanhua Construction Machinery
TY230-3 katapila bụ ọkara isiike kwụsịtụrụ, haịdrọlik nyefe, haịdrọlik achịkwa track ụdị katapila. Na, ike mgbanwe nnyefe nke bụ Unilever ejikwara. The ọrụ usoro e mere dị ka ụmụ mmadụ na igwe engineering na-eme ka ọrụ ndị ọzọ mfe, rụọ ọrụ nke ọma ma n'ụzọ ziri ezi. Strong ike, magburu onwe arụmọrụ, elu na ime arụmọrụ na obosara na-ele na-egosi uru atụmatụ. Nhọrọ-agụnye U-agụba (ikike 8.1 m³), ​​atọ shank Ripper, ROPS na ndị ọzọ na equipments ...
TY230-3 katapila bụ ọkara isiike kwụsịtụrụ, haịdrọlik nyefe, haịdrọlik achịkwa track ụdị katapila. Na, ike mgbanwe nnyefe nke bụ Unilever ejikwara. The ọrụ usoro e mere dị ka ụmụ mmadụ na igwe engineering na-eme ka ọrụ ndị ọzọ mfe, rụọ ọrụ nke ọma ma n'ụzọ ziri ezi. Strong ike, magburu onwe arụmọrụ, elu na ime arụmọrụ na obosara na-ele na-egosi uru atụmatụ. Nhọrọ-agụnye U-agụba (ikike 8.1 m³), three shank ripper, ROPS and other equipments. It is your best choice for road building, hydro-electric construction, field modification, port building, mine development and other constructions.
(bụghị tinyere Ripper) Operation ibu ( n'arọ) 24840
Ground nsogbu (K Pa ) 76
Track nlele (mm) 2000
Min. ala nwechapụ (mm) 405
Ụra iburu gị ike ( m ³) 7.8
Agụba obosara (mm) 3666
Max. egwu ala omimi (mm) 540
N'ozuzu akụkụ ( mm ) 5733× 3666× 3 380
Pịnye Cummins N T 855-c 280S10
Gosiri mgbanwe (rpm) 2000
Flywheel ike ( K W / HP ) 169/230
Max. torque (N • m / rpm) 1050/1400
Gosiri mmanụ ụgbọala oriri (g / KW • h) ≤ 217
Ụdị ịkụ ụdị sprayed doo ya.
Akwụsịla Ọdịdị nke nhazi ụda mmanya
N umber nke track rollers ( ọ bụla n'akụkụ) 7
Number nke ụgbọelu rollers (n'akụkụ nke ọ bụla) 2
Max. usoro mgbali (MPa) 19.1
mgbapụta ụdị abụọ iche iche Kwadobe mgbapụta
System mmepụta ( L / min ) 194
T orque Ntụgharị 3-mmewere 1-ogbo 1-adọ
T ransmission Na, ike mgbanwe nnyefe na atọ gbapụrụ ọsọ na-atụ na atọ gbapụrụ ọsọ laa azu, ọsọ na direction nwere ike ngwa ngwa gbanwere.
S teering ipigide. Multiple-diski mmanụ ike nkà mmụta banyere ígwè diski abịakọrọ site spring. haịdrọlik ejikwara.
Braking ipigide breeki bụ mmanụ abụọ direction sere n'elu gbalaga breeki ejikwara site n'ibu ụkwụ pedal.
F inal drive ikpeazụ mbanye bụ abụọ Mbelata na eketịbe gia na nke sprocket, nke na-anọkwasị site duo-cone akara.
Previous: Nkịtị Structure katapila TY165-3
Next: Nkịtị Structure katapila TY320-3
220hp crawler katapila
320hp Track katapila
Brand New katapila
ehi Dozer katapila
katapila N'ihi Wetland o tinyere n'oru
katapila Track ala
katapila Wetland o tinyere n'oru
crawler katapila Sd13s 130 HP
crawler katapila traktọ
crawler Dozer katapila
crawler esoro katapila
crawler traktọ katapila
Desert katapila 220hp
excavator Na katapila Sprocket
Kids Rubber Track katapila
Kasị Popular New Track katapila
Sd13s Wetland o tinyere n'oru katapila
Sd22s Wetland o tinyere n'oru katapila
Shantui crawler katapila
Shantui crawler katapila Sd13s
Shantui crawler katapila Na Track Akpụkpọ ụkwụ
Shantui Wetlands katapila Sd16l
Ji Cat D6r Lgp Track katapila
Ji Small katapila
Wetland o tinyere n'oru Earthmover crawler katapila
Oke ohia katapila SD7F
Imefusị landfill katapila SD7HW
N'efu landfill katapila TYS230-3HW
Multi-ọrụ katapila TS165-2
Hydro-static katapila SD5K
HBXG na Russian nanị gị n'ụlọnga RBA mkpokọta ...
On June 5th, 2018, HBXG na Russian nanị gị n'ụlọnga RBA ụlọ ọrụ jikotara aka wee abuana ke Ugol Rossii Mining ngosi, nke bụ kasị na kasị akpa coal na Ngwuputa ngosi ẹkenịmde ke Novokuznetsk obodo nke ...